वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा यस्ता चिजहरु राख्नाले हुन्छ लक्ष्मीको बास ! ॐ लेखि सेयर गरौं – Jagaran Nepal
वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा यस्ता चिजहरु राख्नाले हुन्छ लक्ष्मीको बास ! ॐ लेखि सेयर गरौं
एजेन्सी / के तपाईलाई थाहा छ हाम्रो जीवनमा सकारात्मक र नकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव धेरै पर्छ । घरमा सकारात्मक र नकारात्मक ऊर्जासँग जोडिएको चिजहरुलाई वास्तुशास्त्र भनिन्छ । तर आधुनिक समयका मानिसहरु वास्तुशास्त्रमा खासै विश्वास गर्दैनन् । वास्तुशास्त्रले हाम्रो जीवनको दिशामा मोड्न सक्छ । तपाईको घरमा यस्ता चिजहरु राखेमा लक्ष्मीको बास हुन्छ ।
जहिले पनि घरमा राख्नुस् बासुरी
बासुरीलाई बास्तु दोष निर्मुल गर्नमा खास मानिन्छ । आर्थिक समस्याबाट मुक्ति पाउन चाँदिको बासुरी राख्दा घरमा राम्रो हुन्छ । वास्तु शास्त्र अनुसार सुनको बासुरी घरमा राख्दा घरमा लक्ष्मीको बास हुन्छ । सुन वा चाँदिको बासुरी सम्भव नभएमा बाँसको बासुरी राख्दा राम्रो हुन्छ ।
गणेशको नृत्य गरेको मुर्ति
भगवान गणेश हरेक रुपमा मंगलकारी हुन् । तर धन लक्ष्मीको दुख हटाउनका लागि नृत्य गरेको गणेशको मुर्ति घरमा राख्नाले निकै शुभ मानिन्छ । भगवान गणेशको यस्तो मुर्ति घरको मुखय द्धारमा राख्दा राम्रो हुन्छ । मुर्ति छैन भने भगवानको तस्बिर पनि राख्न सकिन्छ ।
घरको मन्दिरमा लक्ष्मी र कुबेरको मुुर्ति वा तस्बिर राखनुहोस्
देवि लक्ष्मीको तस्बिर वा मुर्ति सबैको घरमा हुन्छ तर धन धान्य पाउनका लागि देवी लक्ष्मीको साथै भगवान कुवरको मूर्ति वा तस्विर राख्न जरुरी हुन्छ स्थाई धन लाभधको लागि घरमा देवी लक्ष्मी र भगवान कुबेर दुबैको पुजा गर्नु पर्छ । भगवान कुबेर उत्तर दिशाका स्वामी मानिन्छ ।त्यसैले कुबेरलाई उत्तर दिशामा राख्नु पर्छ ।
घरको मन्दिरमा शंख राख्नु शुभ
वास्तुका अनुसार शंखमा वास्तु दोष हटाउने शक्ति हुन्छ । जुन घरमा शंख राखिएको हुन्छ त्यहाँ जुन कुरा पनि राम्रो हुन्छ । शास्त्रका अनुसार जुनको पूजा स्थलमा देवि लक्ष्मीको साथ शंखको स्थापना पनि गरिएको छ र पुजा गरिन्छ भने त्यस घरमा स्वायम लक्ष्मी माताको बास हुन्छ ।
नरिवललाई श्रीफल मानि देवि लक्ष्मीको स्वरुप भनेर मान्ने गरिन्छ । श्रीफलहरु मध्य एकाक्षी नरिवल निकै नै शुभ हुन्छ । जुन घरमा एकाक्षी नरिवल राखिएको हुन्छ र नियमित पुजा गरिन्छ त्यहाँ संकट कहिले पनि नआउनुका साथै घन घान्यको कमी कहिल्यै हुदैन ।